पुदिनाको प्रयोग नेपालीहरूका लागि नौलो होइन । यसलाई चटनी बनाउन तथा पेट खराब हुँदा वा दुख्दा पानीसँग प्रयोग गर्ने गरिन्छ । पुदिनालाई पानीसँग मिसाएर वा जुसका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसका फाइदा अनगिन्ती छन् । यसमा रहेको पोटासियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, आइरन, फोस्फोरस र भिटामिन सीजस्ता पोषक तत्वले शरीरलाई डिटक्स गरेर शुद्ध र फुर्तिलो बनाउँछ । छाला तथा कपालको सौन्दर्यका लागि पनि पुदिनाको महत्व ठूलो छ । यसले हाम्रो अनुहार र कपालमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्छ । अनुहारमा निखार ल्याउँछ ।
पुदिनाको पातलाई पानीमा उमालेर छान्नुहोस् । त्यसपछि पिउनुस् । पुदिना यस्तो जडीबुटी हो, जसमा धेरै गुण हुन्छन् । पुदिना र कागती मिसाइएको पानीमा आफ्नो खुट्टा राख्नुभयो भने तनाव कम हुन्छ । त्यस्तै, शरीरमा ऊर्जा मिल्छ । पुदिनामा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । जसले गर्दा तपाईंको खुट्टामा रहेका कीटाणुहरू मर्छन् ।
पुदिनाको पानीमा कटन भिजाउनुस् र गर्दनमा लगाउनुस् । केही समय राखेपछि गर्दन धुनुहोस् । दुई हप्तामा एकपटक यस्तो गर्नुभयो भने बिस्तारै–बिस्तारै तपाईंको गर्दनको कालो रङ हटेर जानेछ ।
गर्दन सफा राख्छ
यदि धुलो र मैलोका कारण तपाईंको गर्दन कालो भएको छ भने पुदिना त्यसलाई सफा गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईंले पुदिना मिसाइएको पानीले गर्दन धुनुभयो भने यसमा चमक फर्कनेछ । यसले प्राकृतिक टोनरको काम गर्छ । यसका लागि पुदिनाको पानीमा कटन भिजाउनुस् र गर्दनमा लगाउनुस् । केही समय राखेपछि गर्दन धुनुहोस् । दुई हप्तामा एकपटक यस्तो गर्नुभयो भने बिस्तारै–बिस्तारै तपाईंको गर्दनको कालो रङ हटेर जानेछ । गर्दनमा पुरानो चमक फर्कनेछ ।
कालो पोतोबाट मुक्ति
धुलो र प्रदूषणका कारण तपाईंको अनुुहारमा कालो पोतो जम्मा हुन्छ । पुदिनाको पत्ता र बेसारमा हल्का पानी मिसाएर पेस्ट तयार गर्नुहोस् । त्यसलाई अनुहारमा लगाउनुस् । १५ मिनेट सुकाउनुस् । त्यसपछि हातले हल्का रगड्नुस् । यसो गर्दा अनुहारमा देखिएको कालो पोतो सफा हुन्छ ।
कपाल चिलाउने समस्या
कपाल चिलाउने समस्याबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने पुदिना राम्रो विकल्प हुन सक्छ । पुदिनामिश्रित पानीले कपाल मालिस गर्नुहोस् वा धुनुहोस् । यसमा रहेको एन्टिफंगल र एन्टिब्याक्टेरियाको गुणले कपालमा रहेको इन्फेक्सनलाई कम गर्छ । तपाईंको कपालमा चाया छ भने पनि पुदिनाको पानीले कपाल धुन सक्नुहुन्छ । यस्ता धेरै समस्या पुदिनाले हटाउँछ ।
तपाईंको अनुहारमा पिम्पल्स आएको छ र दुखित हुनुहुन्छ भने पुदिनाको जुसमा सोडा मिसाएर लगाउनुस् । केही समयपछि चिसो पानीले धुनुहोस् । केही दिनसम्म यसो गर्नाले पिम्पल्स कम भएर जान्छ ।
महिनावारीमा समस्या छ ? अब अपनाउनुहोस यो बिधि , हुनेछ समस्याको समाधान
तपाईंलाई पनि भिटामिन ‘डी’ को कमी त छैन?
चिकित्सकको रुखो व्यवहारले रोगीको मनोवल कमजोर
एनजिओलाई पैसा बाँड्न स्वास्थ्यमा चलखेल
पाठेघरमा देखिने तीन समस्या
मौसमी फल नासपाती: गुदीभन्दा बोक्रा फाइदाजनक, त्यसैले नताछी खाँदा यस्तो फाइदा हुन्छ
डार्क सर्कलबाट छुटकारा पाउन यसो गर्नुहोस्
यस्ता छन घ्युकुमारीको १० अदभूत फाइदाहरु, जानिराखौं